अब यसरी काम गर्ने कि ? - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७१ पुष ११ गते ९:५८ मा प्रकाशित
विगत लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको ऐतिहासिक अधिवेशनबाट लामो समयदेखि रहेको गतिरोध अन्त्य भएको विश्वासमा रहेका यहाँका सम्पूर्ण साथीहरु फेरि निराश बन्न पुगेका छन । लामो वादविवादपछि डालसमा अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरण मा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु समेतको रोहबरमा नेजस अमेरिकाको अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व समेत चयन भएको थियो । यो अधिवेशनले अमेरिकामा मात्र नभई मातृ पार्टी नेपाली काँग्रेस र विश्वभरका प्रजातन्त्रवादीहरुको केन्द्रविन्दु रहेको थियो । जसले अमेरिकाबासी आम प्रजातन्त्रप्रेमी नेपालीहरुमा उत्साहको सञ्चार गरेको थियो । सबैको साथ र सहयोगबाट अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भयो पनि । यसबाट सर्वसम्मत नेतृत्वको चयन नभए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नेतृत्व चयन भएको थियो । अब नेपाली जनसम्पर्क समिति चुस्त, दुरुस्त, संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढने विश्वासका साथ आम प्रजातन्त्रवादीहरु खुशी रहेका थिए ।
मतदाताहरुले पनि संगठनको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष मिलेर जानुपर्छ भन्ने चाहना अनुरुप नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको नेतृत्व आएको महशुश सबैले गरेका थिए । अधिवेशन सम्पन्न भएको दुई हप्तापछि हामीले नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको पहिलो बैठक गर्न सफल भयौं । तर पहिलो बैठकमा नै सभापतिज्यूको क्रियाकलापले ठूलो हङ्गामा मच्चाउन पुग्यो । उहाँले आफूखुशी र एकलौटी ढङ्गबाट काम गरेर आम प्रजातन्त्रवादीहरुको मन दुखाउनु भएको छ । सभापतिज्यूले कसको कुरा सुनेर हो डालस अधिवेशनमा पारित भएको विधान रातारात परिवर्तन गर्नुभयो । अधिवेशनबाट पारित भएको विधान परिवर्तन गर्ने अधिकार सभापतिलाई छ कि छैन ? उहाँलाई विधान परिवर्तन गर्ने अधिकार कसले दियो ? विधान परिवर्तन केका लागि गरियो ? भन्ने विविध कुरा केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण साथीहरु मा खुल्दुली हुन पुगेको छ । सभापतिज्यूले यस्तो क्रियाकलाप किन गर्नुभयो ? यो कुरा जान्न र बुझ्न पाउनु र गलत क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउनु प्रत्येक नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरुको अधिकार पनि हो । संस्थाप्रति कसैले नकारात्मक काम गर्छ र संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने काम कोही कसैबाट हुन्छ भने कुनै पनि संस्थामा रहने साथी चुप लागेर पनि बस्न मिल्दैन र बस्न पनि हुँदैन । एउटा व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिले संस्थालाई ठूलो हानी नपु¥याउला भन्न पनि सकिँदैन ।
अर्को कुरा म रातारात विधान परिवर्तन गर्न चाहने मित्रहरुलाई केही प्रश्न यसै लेखबाट सोध्न चाहन्छु । डालस अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि कुन विधान अनुसार निर्वाचन गरियो ? तपाईं आज उपसभापति मनोनित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुन विधान अन्तर्गत गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंले दुई जना सदस्य नियुक्ति गर्नुभयो, त्यो विधानको कुन धारा प्रयोग गरेर गर्नुभयो ? यी यावत कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । विगतमा म स्वयं अधिवेशन तयारी समितिको सदस्य भएको नाताले भन्नुपर्दा हामीले पशुपति पाण्डेको संयोजकत्वमा श्रीकृष्ण लामिछाने र मनोज घिमिरे सदस्य रहेको विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेका थियौं । उक्त समितिले संशोधन सहितको विधान सम्पूर्ण च्याप्टर सभापतिहरु, केन्द्रीय सदस्यहरुलाई समेत राय सुझाव माग गरि सोही अनुरुप तत्कालीन केन्द्रीय कार्य समितिमा समेत छलफल गरेका थियौं । त्यसमा छलफल गरी उक्त विधान उपसमितिले प्रस्ताव गरेको विधान अधिवेशन को बन्द सेसनमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरेर बन्द सेसनमा सो अनुरुप प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
उक्त बन्द सेसनमा विधान सम्बन्धी व्यापक छलफल पनि गरियो । त्यसमा केही साथीहरुले अर्को भ्रमको खेती गर्न सकिन्छ की भनेर केही व्यक्तिहरु हस्ताक्षर गरेको पेपर सामाजिक सञ्जालमा राखेर सहमति भएको हो भनेर प्रचारबाजी समेत गर्दैछन् । त्यो वास्तविकता के थियो भने कुन विधान अन्तर्गत जाने ? के कति र कुन कुन पद रहने भन्नेबारेमा निर्वाचन समिति अनभिज्ञ थियो । विधान पारित नभएका कारणले गर्दा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बन्द सेसनले सबैभन्दा पहिला ३५ सदस्यीय कार्यसमिति राख्ने र उक्त कार्यसमितिमा तपसिलका पदहरुको चुनावबाट आउने भनेर उक्त बन्द सेसनले निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराएको मात्र हो । त्यसपछि निर्वाचन समितिले आफ्नो कार्य शुरु गरेको थियो । यदि त्यही कुरा नै विधान सम्बन्धी सहमति हो भनेर सुगा रटाई गर्ने साथीहरु लाई फेरि मेरो अनुरोध के छ भने कुनै विधान पारित गर्न वा विधान संशोधन गर्ने अधिकार बन्द सेसनका प्रतिनिधिहरुमा मात्र निहित हुन्छ, त्यो तपाईहरु केही व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दैमा साधारणसभाको अधिकार न तपाईंहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? न तपाईंहरुको अधिकार नै हो । तेस्तै धारावाहिक रुपमा अर्को भ्रमको खेती गर्दै एक जना व्यक्तिले एउटा भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै यो विधानमा मेरो सहमति छैन भनेर हालेको पनि देखियो । म उहाँ मित्रलाई भन्न चाहन्छु कि यो एकाइसौं शताब्दीको अमेरिका हो, तपाईं राणा शासनको श्री ३ महाराज होइन, जे बोल्यो त्यो कानून बन्ने, “पाँडे पजनी” । यो तपाईंको मौलिक अधिकार हो । कुनै इस्युमा सहमति राख्ने या नराख्ने ? तेसलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्छु, यही नै हो जनतन्त्र तर यसको अर्थ यो नबुझनुस् कि तपाईंको सहमति नहुँदासाथ सबै प्रतिनिधि साथीहरुको सहमति नहुने होइन । तपाईंले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको हो तर सम्पूर्ण उपस्थित प्रतिनिधि हरुको होइन ? यदि तपाईंले सम्पूर्ण विचार समेट्न सक्ने खुबी भएको भए निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्ने थिएन र विवादित व्यक्तिको रुपमा तपाईं संस्थामा देखापर्न हुन्न थियो होला ।
उक्त बन्द सेसनमा म आफू पनि स्वयं भएका कारणले गर्दा मलाई पनि त्यसबारेमा केही शब्द लेख्न मन लाग्यो । विधान उपसमितिले उक्त दिन करिब ५०/६० कपी विधान फोटोकपी गरेर प्रतिनिधिहरु समक्ष बाँडेको पनि थियो । उक्त बन्द सेसनमा विधान उपसमितिका तीन जना, तत्कालीन अधिवेशन तयारी समितिका संयोजक लगायत केन्द्रीय सदस्यहरु, नवनिर्वाचित सभापतिहरु र उक्त विधान प्रस्ताव गर्न वेद खरेलजी र भक्त थापा लगायत धेरै उल्लेखित प्रतिनिधि साथीहरुको उपस्थिति थियो । जब निर्वाचन समितिलाई कुन कुन पदको चुनाव गराउने भन्नेबारे पारित पदहरुको जानकारी पठाएपछि फ्लोर खुला गरेर विविधि बिषयमा त्यहाँ छलफल हुन थाल्यो, विभिन्न प्रतिनिधि मित्रहरुले बोल्ने क्रममा एक जना मित्रले मनोनित उपसभापति महिलाबाट हुनुपर्ने भन्ने माग गर्नुभयो भने अर्का केही साथीहरुले जनजातिर दलितबाट पनि आरक्षण कोटा हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । झण्डै १०/१२ जनाले उक्त विधानको बारेमा छलफल र त्यसको कमेन्ट गरेपछि अन्तमा तत्कालिन संयोजकले सम्पूर्ण साथीहरुको सुझावलाई समेटेर विधानलाई पूर्ण बनाउनका लागि विधान उपसमितिलाई अनुरोध गरेर उक्त बन्द सेसनलाई अन्त गरेको घोषणा समेत गरेको कुरा म लगायत त्यहाँ सहभागी प्रतिनिधि साथीहरुलाई विदितै छ ।
अहिले आएर विधानका बारेमा बखेडा निकाल्नुपर्ने र विधान पासै भएको छैन भन्नुको पछाडि कारण के छ ? के का लागि यसमा विवाद गरिदैंछ ? यो सोचनीय कुरा हो । त्यो भन्दाभन्दै म मेरा सभापतिज्यूलाई अर्को अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । यदि तपाईं आफैं विधान पारित भएको छैन भनेर हिंड्नुभएको छ, भने कुन विधान अनुसार तपाईं यी सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ ? के तपाईं लगायत तपाईंको कार्यसमिति लाई विधान पारित गर्ने अधिकार छ ? के कारणले प्रतिनिधिहरुबाट पारित भएको विधानबाट डराएर भाग्दै हुनुहुन्छ ? त्यसमा डराउनुपर्ने कारण के छ ? विधानमा संगठनलाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनका लागि मनोनित उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित सदस्यहरुमध्ये महिला, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक हरुबाट मनोनित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्को कुरा निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाई मनोनित नगर्न भनिए को छ । त्यस्तै अर्को बुँदामा कुनै पनि मनोनित गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिमा अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसमा डराउनुपर्ने कुरा के छ ? के कारणले यो विधानलाई पन्छाउन प¥यो ? यसबारेमा सभापतिज्यूबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ भन्ने मैंले देखेको छु । नेपाली काँग्रेस स्वयम् आफूमा एक लोकतान्त्रिक तथा समावेशी पार्टी हो र सो मुद्दाको संवाहक पनि । हामी अरुलाई समावेशी हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिने तर आफूले त्यो लागू गर्ने बेला आउँछ, त्यतिखेर किन खुट्टा कमाउँछौं ? के तपाईं तपाईंको कार्यसमितिलाई समावेशीको उत्कृष्ट उदाहरणको रुपमा हेर्न चाहनु हुन्न वा समावेशीको मुद्दामा तपाईंको आपत्ति छ ? स्पष्ट हुनुहोस र पार्नुहोस् । आम प्रतिनिधिहरुको विश्वास प्राप्त गरेर हामी यो ओहोदामा आएका हौं, हामीले उहाँहरुको इज्जत र विश्वास अटुट रुपमा कायम राख्नको लागि पनि नेपाली समाज तथा राष्ट्रका लागि केही गर्न हिम्मत निकाल्न सक्नुपर्छ ।
अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरु
तत्कालमा रहेका समस्याहरु हामीले विगत कनेक्टिक अधिवेशनमा पारित गरेको ‘महिनाको एक डलर मातृभूमिका लागि’ भन्ने अभियान छोटो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय बन्न सफल भएको थियो । यो अभियानलाई पुनर्जीवित गरी निरन्तरता दिन, र यो अभियानलाई अगाडि बढाउँदा प्रत्यक्ष रुपमा मातृभूमिलाई फाइदा हुने देखिन्छ । कमसेकम हामीले हाम्रा सदस्यहरुबाट महिनाको एक डलर उठाएर मातृभूमिमा प्रयोग गर्न सके पनि हामीले हाम्रो संस्थाको नाम उच्च राख्न सक्ने थियौं । हामीले यसबाट उठाएको रकम पवित्र सामाजिक कार्यमा लगाउन सके पनि जन्मभूमिलाई केही हदसम्म सहयोग हुने थियो । त्यस्तै अमेरिकामा नेपालीहरुको बढ्दो बसोबास हुँदै आएको छ । हामीसँग तथ्य तथ्याङ्क छैन तर पनि यहाँ नेपालीहरुको ठूलो समाज भईसकेको छ । दिनप्रतिदिन हामीले दुःखद समाचार पनि सुनिरहेका छौं । दुर्घटना तथा अन्य दुःखद घटनाहरु सुन्नुपरेको छ । कहिलेकाँही आर्थिक कारणले गर्दा अत्येष्टि समेत गर्न नसकेको सुन्न परेको छ । त्यस्तालाई सहयोग गर्नु भनेको एउटा मानवीय धर्म पनि हो । हामी सामाजिक मानिस र सामाजिक संस्था भएका कारणले हाम्रो नैतिक कर्तव्य पनि हो र त्यसका लागि हामीले एउटा आकस्मिक फण्ड तयार गर्न सक्छौं । हामी हाम्रो मातहतमा रहेका सदस्य, च्याप्टर, व्यापारी, बुद्धिजीवी तथा अन्यहरुसँग सरसल्लाह गरेर आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौं र यसलाई के कसरी प्रयोग गर्ने नीति बनाएर कमसेकम भवितव्य परेको खण्डमा केही आर्थिक सहयोग गर्न पनि हामीले पहल गर्दा प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा ठूलो राहत पुग्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।
अर्को जटिल समस्या नेपाली समाजमा देखा परिरहेको छ । हामी नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था भनेर अगाडि बढिरहेका छौं भने हामीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । हामीले पहल ग¥यौं भने हुनसक्छ र सरकारले पनि प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको दुःख पीडामा साथ दिनु नै पर्छ । अहिले अमेरिकामा रहेका दश हजारभन्दा बढी नेपालीहरुको समस्या हो यो । यो समस्यालाई मात्र नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले सम्बोधन गर्न सके मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ र यहाँको नेपालीहरुले हामी लगायत हाम्रो संस्थालाई विश्वास गर्दछन् । अहिलेको टड्कारो समस्या भनेको विगतमा यहाँ कति नेपालीहरु राजनीतिक पीडितका रुपमा स्थापित भएका छन् । उहाँहरुले आफू स्थापित भएपछि आफ्ना परिवारलाई अमेरिकामा ल्याउन सफल भए र आए पनि । नियम अनुसार उहाँहरु सिधै नेपाल जान आउने अधिकार समेत छ, उहाँहरुको हाल आएर धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको राहदानी मिति समाप्त भएको छ, भने हाल नेपाल सरकारले एमआरपी राहदानी लागू गरेपछि त्यसबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । यसरी आउने मानिसहरुको राहदानी नेपाल सरकार अन्तर्गत अमेरिकामा रहेको दूतावासले पनि राहदानी रिन्यू गर्न नियम अनुसार मिल्दैन भनेर फर्काउने गरेको छ । उता ट्राभल डकुमेन्ट लिनका लागि समय पनि धेरै लाग्ने र आफ्नै देशमा जान पनि भिसा लिनुपर्ने अवस्था छ । यसरी ग्रिन कार्ड हुँदाहुँदै पनि पासपोर्टको मिति सकिएका कारण कति नेपालीहरु आफ्नो देश जान सकिरहेका छैनन् भने ट्राभल डकुमेन्ट लिन पनि धेरै समय पनि लाग्ने र उक्त डकुमेन्ट एक बर्षको लागि मात्र हुने हुँदा हामीले फेमिली रि ¥युनियन अन्तर्गत आएका नेपालीहरुको जसरी दूतावासले साधारण पासपोर्ट नवीकरण गर्छ त्यसरी नै पासपोर्ट नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो र हामीले त्यसमा चुक्नु पनि हुँदैन । हामी देश र प्रवास अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको दुःख सुखमा साथ दिएका थियौं, दिन्छौं र दिईरहने छौं भन्ने प्रमाण पनि हुनेछ अमेरिकामा नेपाली समाजलाई । यस्ता विकराल समस्याहरुमा ध्यान दिन सकियो भने हामी लाई सबैले विश्वास गर्नेछन् । त्यसैले मित्रहरु यस्ता जल्दाबल्दा समस्याहरुमा ध्यान दिएर अगाडि बढनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
अर्को समस्या अमेरिकामा एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जान कमसेकम ८ / १० घण्टा उडेर जानुपर्ने अवस्था छ । नेपाली राजदूतावास वासिङ्गटन डीसीमा छ भने कन्सुलरको कार्यालय न्यूयोर्कमा रहेको छ । तत्कालीन सरकारले केही समय अगाडि न्यूयोर्कको कन्सुलर कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा त्यहाँका सम्पूर्ण नेपालीहरु लगायत स्वयं जनसम्पर्क समितिका संयोजक बिष्णु सुवेदीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर त्यसलाई यथावत राख्न सफल हुनुभयो । त्यो ज्यादै खुशीको कुरा पनि हो । त्यस्तै हामी वेष्टकोटमा बस्ने नेपालीहरुका लागि अर्को जल्दोबल्दो समयस्या भनेको कुनै केही काम प¥यो भने यहाँबाट ८/१० घण्टा उडेर डीसीसम्म जानुपर्छ, यसबाट धेरै असुविधा भएका कारण वेष्टकोटको कुनै न कुनै ठाउँमा कन्सुलरको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका लागि जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले पहल गर्नुपर्छ । उक्त बिषयमा यहाँका साथीहरुले पनि पटक पटक पहल पहिलादेखि नै गरेका हुन भने नेपाली जन सम्पर्क समिति क्यालिफोर्निया च्याप्टर जुन बेलामा स्वर्गीय रत्न पोखरेल सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यस बेलामा यहाँको च्याप्टर अधिवेशन बाट निर्णय पारित गराई च्याप्टरले नेपाली काँग्रेस र नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्ता पवित्र कार्यहरुमा अगाडि बढ्दा मात्र संस्था र हामीहरुको साख बढ्छ र समाजले हामीलाई विश्वास समेत गर्छन् ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका नेपाली काँग्रेसको एउटा भातृ संस्था हो । अमेरिका जस्ता विकास शील देशमा बसोबास गर्ने प्रजातन्त्रवादी नेपालीहरुको संस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले नेपालमा नयाँ संविधानका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । नेपालमा निर्धारित समयमा नै नयाँ संविधानका लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले पनि शीर्ष नेताहरुलाई दबाब बढाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता पनि हो ।
त्यसैले म सबै मित्रहरुलाई संस्थाको नेतृत्वका लागि जसरी हामीहरुलाई साथीहरुले विश्वास गर्नुभएको छ, त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ । कसलाई सल्लाहकार बनाउने, कसलाई मनोनित गर्ने, को प्रतिनिधि नेपाल पठाएर कसलाई सहयोग गर्ने, आफूलाई मत नहाल्नेहरुलाई कसरी ठेगान लगाउने, आफूलाई सहयोग गरेको नाममा प्रतिनिधि साथीहरुले नेतृत्व पङ्क्तिमा नपठाएको व्यक्तिलाई जालझेल र वैधानिक र प्रतिनिधि साथीहरुले पारित गरेको विधानलाई समेत कुल्चेर आफूखुशी मन गढन्ते विधान राखी संस्थाको अपमान गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं । नेपाल, नेपाली समाज र संस्थाको हितका लागि काम गर्ने बानी बसालौं । त्यसका लागि म सार्वजनिक रुपमा यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नचाहन्छु कि सभापति ज्यूबाट दिएका जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै उहाँका प्रत्येक कुरामा सहयोग गर्ने वचनवद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु । साथै यो प्रण पनि गर्न चाहन्छु कि राम्रा, असल र जनहित, नेपाली समाज र देशका लागि हित हुने कार्यमा सदा सर्वदा सहयोग गर्ने वचनवद्धता पनि प्रकट गर्दछु ।
(केसी नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)